Maitiro ekuita kupenya kubhenekera pa iPhone kana uchidana | IPhone nhau
Maitiro ekuita kupenya kubhenekera pa iPhone pavanondidaidza
Pablo Aparicio | | IPhone nhau, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kune akawanda marongedzero ayo, mukuwedzera kune acoustic yambiro uye vibration, zvakare inosanganisira yekuona yekuzivisa. Aya maziso ekuona anowanzo kuve LED inoyambira kuti ivo isu kana kuti ivo vatidaidza. Zvimwe zvezvigadzirwa izvi zvakare zvine LED inoburitsa mwenje wakasiyana ruvara zvichienderana nechishandiso chakatizivisa, senge girini yeWhatsApp, bhuruu yeSkype, kana orenji kune yekufona. Parizvino hapana iPhone iyo ine LED yakadaro, asi isu tinogona kugadzira iyo flash inotendeuka kana chiziviso chikapinda.
Kana ndichifanira kutaura chokwadi, kuvhenekera mwenje pavanotisheedza zvinoita kunge kwandiri hazvibatsiri kana tisina matambudziko ekunzwa, nekuti, mune zvakajairika mamiriro, pese patinowana iyo iPhone padhuze tinonzwa kunyevera kana kucherechedza kudedera, Asi panogona kunge paine mamiriro ezvinhu angave anonakidza, senge, semuenzaniso, kana tikasiya foni patafura isu tichiita mabiko nemumhanzi une ruzha. Uye zvechokwadi, hongu zvichave inobatsira kune vasinganzwe kunzwa.
1 Maitiro ekushandura iyo iPhone kupenya mune yekuzivisa LED
2 Ko Apple ichatangisa iyo iPhone ine LED yekuzivisa?
Maitiro ekushandura iyo iPhone kupenya mune yekuzivisa LED
Isu tinovhura iyo iPhone magadziriso.
Isu tinopinda chikamu cheGeneral.
Tevere isu tinotsvaga uye kuwana Accessibility.
Chekupedzisira, isu tinotsvedza uye, muchikamu cheUDZIDZISO, tinogonesa switch iyo inoti Flashing LED yambiro.
Zviri pachena kuti inozadzisa basa panguva iyo yatinogashira zviziviso, asi haisi yakazara sisitimu. Ndingati zvinhu zviviri zvisipo kuti zvive:
Iyo ziviso haina kudzokororwa. Izvi zvinoreva kuti zvakangonaka chete panguva yazvinonzwika. Izvo zvine musoro kana isu tichifunga kuti iyo system iyo Apple yaisanganisira yakagadzirirwa vanhu vane matambudziko ekunzwa. Tinogona kuti "Uye nei isingarambe ichivhenekera kunyevera kuti pane yakamirira ziviso?", Iyo ine mhinduro yakapusa: iyo iPhone haina ziviso LED, isu tatozviziva izvi, asi zvazvinoshandisa se kwakadaro Iko kupenya kwemafoto. Kamera inopenya yakagadzirirwa kujekesa zviitiko uye kuita kuti zvioneke zvakanaka. Kupenya uku kunotora simba rakawanda, saka kana tikawana chiziviso, kupenya kuri kupenya uye isu hatisi kumberi kuchimisa, zvinowanzoitika kuti, kana tikazviziva, bhatiri radonha zvakanyanya. Nekuzvimiririra iri imwe yematambudziko ekubata mafoni efoni, izvi hazviite senge zano rakanakisa.
Ingo zivisa chete neruvara rumwe. Kunyangwe iyo iPhone ichishandisa Yechokwadi Tone kupenya iyo inogona kuburitsa mwenje nemhando dzakasiyana tembiricha kubva kune iyo iPhone 5s, iyo flash notices inogara iri chena. Kana munhu asinganzwe akaona kuti yavo iPhone inovanyevera nezve "chimwe chinhu" chine mwenje, munhu uyu haakwanise kuziva kusvikira vasvika voona chidzitiro kana chiziviso chiri kutaurwa paTwitter, WhatsApp kana alarm. Izvo zvinogona kuve dambudziko.
Ko Apple ichatangisa iyo iPhone ine LED yekuzivisa?
Kana ndichifanira kuva akatendeseka, ndinokahadzika nazvo. Ichokwadi kuti aya marudzi emaLED haatore nzvimbo yakawanda uye kuti anogona kuwedzerwa chero kupi, asi mubvunzo ndewokuti Vaizoiisa kupi? Tichitarisa iyo chena iPhone 6s kubva kumberi, chishandiso chine maburi matatu kumusoro: iyo yemutauri, iyo yekamera uye imwe yeyenzwi remwenje. Izvo zvinoita kunge zvisingaite kuti Apple inosarudza kuwedzera gomba rechina, kana kusaisa ziviso inotungamirwa.
Pamusoro pezvo, makambani eetekinoroji ari kuedza kurongedza zvinhu zvakawanda sezvazvinogona mune tsoka diki. Zvinonzi chimwe chezvikonzero nei iyo iPhone 7 Iyo haizove ne3.5mm jack, ndeyekuti mudziyo uve mutete pane iyo iPhone 6 iyo yatove yakatetepa. Sezvineiwo, iyo chiziviso LED chikamu cheiyo Hardware iyo Apple inoramba yeye mudziyo wekuchengetedza dhizaini isina kuwandisa.
Zvatichaona zvechokwadi mune ramangwana ndi chishongedzo icho chinoenderana se LED yezaziso. Pave paine akawanda maKickstarter mapurojekiti akaburitsa makesi erudzi urwu, senge Lunacase yauinayo mumufananidzo wekare unotinyevera kuti vari kutidaidza uye vanoshandisa simba rinobuda muiyo iPhone. Mune mamwe mazwi, zvinotora mukana wesimba rakatenderedza chishandiso kuburitsa mwenje wekuyambira.
Chero zvazvingaitika, kunyangwe zvingave zvakanaka kuona izvo zvakamirira zviziviso mumavara akasiyana, ini ndinonzwisisawo kuti Apple inopa kukoshesa zvimwe zvinhu, senge mbiri-lens kamera inotarisirwa kuti ibve paruoko rweiyo iPhone 7 kana iyo chidzitiro AMOLED iyo, sekureva kwerunyerekupe, ichasvika muna2018 nemukana wekuti tichazviona pane iyo iPhone 7s. Iwe unosuwa iyo ziviso LED pane iyo iPhone?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone nhau » Maitiro ekuita kupenya kubhenekera pa iPhone pavanondidaidza
Fabiola akasimuka akadaro
Ndingaita sei kupenya paanondisheedza nei achiratidzika seiyi haisiyo yandinayo iPhone 6
Pindura Fabiola Rosa
MIRIAMAM SANTOS LOPEZ akadaro
Mhoro shamwari, unogona
Pindura kuna MIRIAM SANTOS LOPEZ
Ndine iphone 6s plus uye kana iyo yakatungamira mukuzivisa yakashanda asi ini ndatova nemazuva mazhinji kuti kwete ... ini ndatoidzosera uye ndikagadzirisa yazvino vhezheni uye hapana. Rubatsiro !!
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, unogona kuzvigadzirisa?
Pindura kuna Artuto
Ndingaite sei kuti ndiise iyo flash pafoni 7
Pindura kuna Naylen
Ndinogona kukutendai zvikuru
Pindura kuna Yose
DANIELA JUSTO akadaro
NDINE YEMAHARA 6 uye HANDIGONI. UNOGONA KUTI NDITUNGIDZE PLEASE !!
NDAKATEGENGA KUTEVERA MATANHO APamusoro. WAITA HAKO!
Pindura DANIELA JUSTO
Akatora rubatsiro paakamusunga zvekuti nharembozha ye iPhone 8plus inobatidza mwenje pavanondidaidza kana pavanotumira meseji, ndibatsireiwo.
Canada DJ Deadmau 5 Inobatanidza Beats 1
Apple patents sisitimu yekudzora TV uye zvimwe zvishandiso nemasaini